News Collection: अन्तरपार्टी विवाह झन्झटिलो !
अन्तरपार्टी विवाह झन्झटिलो !
टेकनारायण भट्टराई, पाल्पा, मंसिर २५– वेहुला पक्ष एमाले, बेहुली पक्ष माओवादी। वेहुलाको प्रस्ताव थियो बिहेको ब्यानरमा 'प्रगतिशिल बिहे' लेख्ने। बेहुली पक्षलाई त्यो मन्जुर भएन। उनीहरुले 'जनवादी बिहे' लेख्ने अडान लिए। अन्तत बार्ता टोली बन्यो। त्यसले रातभरि लाएर एउटा निष्कर्ष निकाल्यो- 'परिवर्तनशील बिहे' राख्ने।
शुक्रबार तानसेनमा खानीगाउँका पूर्णराज गैरे र यम्घाकी सर्मिला न्यौपाने बिवाह बन्धनमा बाँधिए। बेहुला-बेहुलीको परिवार फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुँदा बिहे झन्जटिलो बन्यो। बिहे समारोहमा आसन ग्रहणमा दुई परिवारलाई राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन हम्मे पर्‍यो।
बेहुली र उनका दाजु माओवादी भएपनि बुवा कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य रहेकाले उनको चित्त बुझाउन कांग्रेसका बुद्धिजीवि तथा ब्रामण समाज पाल्पाका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद न्यौपाने बिहे समारोहका सभापति बनाइए। माओवादी, एमाले र कांग्रेसका नेतालाई मञ्चमा आसन ग्रहण गराइयो।
बेहुलीका दाजु कृष्णले मञ्चबाट भने- 'यो बिहे जनवादी पनि हैन प्रगतिशील पनि हैन। यो परिवर्तनशील बिहे हो।' माओवादी सम्बद्ध मजदूर संगठनका नेता समेत रहेका उनले विवाह समारोहमा भने- 'फरक राजनीतिक पृष्ठभुमि भएपनि वैवाहिक जीवनमा त्यसले फरक पार्दैन।'
बेहुलाका दाजु एमालेका सक्रिय सदस्य धातानन्द गैरेले बिहेलाई नामाकरण गर्न भएको वार्ता राती १ बजेसम्म चलेको र सहमतिमा टुंगेको बताए। मञ्चबाट बेहुलाले बिहेको प्रस्ताव पत्र पढेर सुनाएका थिए भने बेहुलीले माईकबाटै प्रस्ताव स्वीकारको घोषणा गरिन्। 'भडि्कलो बिहे भन्दा नयाँ शैलीको बिहे गर्ने निर्णय गरेका हौं।' बेहुला फर्सुरामले नागरिकन्युजसँग भने- इन्टरकाष्टमा जस्तै इन्टरपार्टी म्यारिजमा पनि थोरै झन्जट हुँदो रैछ।'
बेहुली सर्मिलाले आँफू पढ्दै गरेको जनता उच्च माविकै सभाहलमा विहे गर्दा अनौठो महसुस गरेको बताइन्। उनी जनता माविमा विए तेस्रो बर्ष अध्ययनरत छिन्।